Shina Inona no jiro mazava ho an'ny jiro LED? orinasa sy mpanamboatra | REIDZ
Fahazavana inona no loharanon'ny jiro LED?
Toerana misy ankehitriny: jiro Austech> News Center> Karazan-jiro inona no jiro takelaka LED?
Ny loharano jiro LED dia karazana jiro haingon-trano vaovao, izay tambin-tsoa ho an'ny loharano jiro sy jiro tondra-drano. Jiro maranitra izay afaka manolo ny mombamomba manokana fandaharam-panehoana misy teboka sy fiantraikany miafina amin'ny alàlan'ny fifangaroan'ny loko piksel. Ny loharanom-pahazavana LED teboka dia namboarina ho loharano fahazavana ho an'ny zato. Loharano maivana dia loharano ara-batana azo tsapain-tanana, mba hanamorana ny fikarohana ireo olana ara-batana. Toy ny fiaramanidina milamina, teboka faobe ary tsy misy fanoherana ny rivotra, dia loharano maivana no mivoaka avy ao anaty toerana mankany amin'ny toerana manodidina.
Ny jiro dia diode mamoaka jiro. Ny fotokevitra miasa sy ny toetra elektrika sasany dia mitovy amin'ny dioda kristaly mahazatra, fa ny akora kristaly ampiasaina dia hafa. Ny tarika LED dia ahitana karazana jiro hita maso, jiro tsy hita maso, laser ary sns. Ary ny jiro mazava azo jerena dia mahazatra amin'ny fiainana. Ny loko milina fanodinana maivana dia miankina amin'ny fitaovana ampiasaina. Amin'izao fotoana izao dia misy loko marobe toy ny mavo, maitso, mena, volom-boasary, manga, volomparasy, cyan, fotsy, ary miloko feno ary azo atao endrika samihafa toy ny fisarahana sy faribolana. Ny LED dia manana tombony amin'ny fiainana lava, ny habe kely sy ny lanja maivana, ny fanjifana herinaratra (famokarana angovo), ny vidiny ambany, sns. Ary ny fitrandrahana ambany, ny fahaizan-jiro avo lenta, ny fotoana famaliana manjelatra be dia be, ny habetsaky ny mari-pana tsy miasa, ny jiro madio ny loko, sy ny rafitra matevina (ny fanoherana Shock, ny fanoherana ny fantsona), ny fampisehoana maharitra sy azo antoka ary andian-dahatsoratra, dia tena tian'ny olona tokoa.
Ny vatana manjelanjelin'ny LED dia manakaiky ny loharanom-pahazavana "point", ary ny fananganana ny jiro dia mora kokoa. Na izany aza, raha ampiasaina ho toy ny fampisehoana faritra lehibe, ny ankehitriny sy ny fanjifana herinaratra dia samy lehibe. Ny hazavana LED dia matetika ampiasaina amin'ny fitaovana fampisehoana toy ny jiro fantsom-pahalalana, ny fantsom-batana nomerika, ny takelaka fampisehoana ary ny fitaovana fampitaovana ny sary elektronika, ary ampiasaina koa amin'ny serasera optika, sns, ary koa ny haingoana ny drafitra fananganana, ny kianja fialamboly. bileta, arabe, dingana ary toerana hafa.
Loharano jiro LED, mampiasa LED tokana ho loharano jiro, ary ny làlambe maivana dia voafehy amin'ny alàlan'ny famoahana hazavana maimaimpoana maimaim-poana, izay mahomby amin'ny fanjifana herinaratra ambany, avo lenta, ambany fikojakojana ary maharitra ela. Aorian'ny fitsapana ara-teknika dia mahafeno ny fepetra takian'ny fenitra ara-teknika mifandraika. . Karazana optika jiro vaovao beacon mifanandrify amin'ny lenta maimaimpoana maimaim-poana sy ny loharanon-jiro point point LED dia fanavaozana ara-teknika lehibe takatry ny fitaovana maivana.
Raha ampitahaina amin'ireo loharano maivana nentim-paharazana, loharano maivana point point LED dia kely amin'ny habeny ary maivana lanja. Izy ireo dia azo atao ho fitaovana misy endrika isan-karazany mba hanamorana ny fandaharana sy ny famolavolana jiro sy fitaovana isan-karazany, miaraka amin'ny fampifanarahana mahery vaika sy ny elanelana fampiharana malalaka. Tsara ny tontolo iainana. Satria ny loharano jiro LED dia tsy mila manampy ny mitrandraka vy amin'ny fizotran'ny famokarana, aorian'ny fanariana ny LED dia tsy hiteraka fahalotoan'ny mercury, ary ny fako dia saika azo raisina, izay tsy vitan'ny loharanon-karena fotsiny, fa miaro ny tontolo iainana ihany koa. Ny loharanom-pahazavana maivana azo antoka sy azo antoka dia azo atosin'ny vonjimaika mivantana tsy mihetsika, ary ny volavolan-tsolika amin'ny ankapobeny dia eo anelanelan'ny 6 ~ 24V, noho izany dia somary tsara ny fampandehanana fiarovana, indrindra fa mety ho an'ny toerana ho an'ny daholobe. Ho fanampin'izany, ao anatin'ny toe-javatra ivelany ivelany tsara kokoa, ny loharanom-pahazavana LED dia manana tarazo ambany kokoa ary fiainana lava kokoa noho ny loharanom-pahazavana nentim-paharazana. Na dia navadika matetika sy mandeha matetika aza izy ireo dia tsy hisy fiantraikany amin'ny fiainam-panompoana azy ireo.